မွေစံကို (၁၀)မိနစ်လောက် ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆို ဘာလုပ်ချင်လဲလည်း? လို့ ပရိတ်သတ်တွေကို မေခွန်း ထုတ်လိုက်တဲ့ “နန်းမွေစံ” – Shwe Sar
မွေစံကို (၁၀)မိနစ်လောက် ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆို ဘာလုပ်ချင်လဲလည်း? လို့ ပရိတ်သတ်တွေကို မေခွန်း ထုတ်လိုက်တဲ့ “နန်းမွေစံ”
မော်ဒယ်နန်းမွေစံကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကို အများဆုံးဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ အလန်းစားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်စူးရှတဲ့ အကြည့်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်ကို ရယူ ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ထက်တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာဆန်ဆန်ဖက်ရှင်လေးတွေ ကိုလည်း ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေအနေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးနေတဲ့အပြင် ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ပွဲတွေကိုလည်း တတ်ရောက်လျက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်အမိုက်စားTIKTOKလေးတွေကို ဆော့ကစားလေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားအာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံနေတဲ့ မော်ဒယ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမယ့်လည်း အပြုံးမပျက် ဘဲ အနုပညာအလုပ်တွေ ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်။
သူမကတော့ ယခုမှာ အမိုက်စားပုံစံလေး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို လှုပ်ခါပြီး ကပြထားတဲ့ Tiktokဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပရိသတ်တွေရဲ့ ရှေ့ကို ချပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အမိုက်စားTIKTOKဗီဒီယိုလေးဟာ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ကြည့်ရူသူတွေ များပြားလျက်ရှိနေပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်နန်းမွေစံရဲ့ အဆိုပါTIKTOKဗီဒီ ယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆို ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Previous post အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း အလှတွေ နဲ့ ပုရိသတွေ ကို ရန်ခုန်သံမြန်အောင် ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် ဝင်းရွှေရည်သင်း
Next post ကိုယ်လုံးလေးကိုလှုပ်ခါပြီး အပီအပြင်ဒွန့်နေ တဲ့ သွန်းဆက် ရဲ့အမိုက်စားTIKTOK ဗီဒီယိုလေး